BitMark စျေး - အွန်လိုင်း BTM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitMark (BTM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitMark (BTM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitMark ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $83 732 036.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitMark တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitMark များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitMarkBTM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.103BitMarkBTM သို့ ယူရိုEUR€0.0872BitMarkBTM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0787BitMarkBTM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0938BitMarkBTM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.928BitMarkBTM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.649BitMarkBTM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.29BitMarkBTM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.384BitMarkBTM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.137BitMarkBTM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.144BitMarkBTM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.3BitMarkBTM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.796BitMarkBTM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.559BitMarkBTM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.71BitMarkBTM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.17.34BitMarkBTM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.141BitMarkBTM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.156BitMarkBTM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.21BitMarkBTM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.716BitMarkBTM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.89BitMarkBTM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩122.21BitMarkBTM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦39.47BitMarkBTM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.58BitMarkBTM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.85
BitMarkBTM သို့ BitcoinBTC0.000009 BitMarkBTM သို့ EthereumETH0.000265 BitMarkBTM သို့ LitecoinLTC0.00181 BitMarkBTM သို့ DigitalCashDASH0.00105 BitMarkBTM သို့ MoneroXMR0.0011 BitMarkBTM သို့ NxtNXT7.6 BitMarkBTM သို့ Ethereum ClassicETC0.0149 BitMarkBTM သို့ DogecoinDOGE29.37 BitMarkBTM သို့ ZCashZEC0.00112 BitMarkBTM သို့ BitsharesBTS3.93 BitMarkBTM သို့ DigiByteDGB3.52 BitMarkBTM သို့ RippleXRP0.357 BitMarkBTM သို့ BitcoinDarkBTCD0.00351 BitMarkBTM သို့ PeerCoinPPC0.334 BitMarkBTM သို့ CraigsCoinCRAIG46.37 BitMarkBTM သို့ BitstakeXBS4.34 BitMarkBTM သို့ PayCoinXPY1.78 BitMarkBTM သို့ ProsperCoinPRC12.77 BitMarkBTM သို့ YbCoinYBC0.00005 BitMarkBTM သို့ DarkKushDANK32.63 BitMarkBTM သို့ GiveCoinGIVE220.27 BitMarkBTM သို့ KoboCoinKOBO23.13 BitMarkBTM သို့ DarkTokenDT0.0947 BitMarkBTM သို့ CETUS CoinCETI293.66